October 2020 - Page2of3- ရွှေအလင်း
October 9, 2020 Shwelight 0
နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ညီမဖြစ်သူ မနွေးနွေးလှိုင်ရဲ့ခင်ပွန်း ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီး ဆုံးပါးသွားခဲ့တာကိုတော့ ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါနော်။ လူတစ်ယောက်လုံးဆုံးပါးသွားတာကို သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးမှာ မိသားစုဝင်တွေက လိုက်ပါပို့ဆောင်ခွင့်မရဘဲ Q ဝင်နေခဲ့ရတာကလည်း ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါရဲ့ရက်စက်မှုတွေထဲက တစ်ခုပါ။ လတ်တလောမှာတော့ မနွေးနွေးလှိုင်တို့ မိသားစုတစ်လုံး ကိုဗစ်ပိုးကင်းစင်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမယ့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို လောလောလတ်လတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့ခံစားချက်ကတော့ ရင်ထဲမှာကျန်နေသေးဦးမှာ အမှန်ပါပဲ။ အခုလို ကိုဗစ်ကြောင့် […]
သည်စကားပုံလေး ငယ်စဉ်ကပင် ကြားဖူးခဲ့ပါ၏။ သို့သော် ဆိုလိုရင်းကို ဝေဝါးစွာပင် အိမ်ထောင်ကျပြီး ဘူးစိုက်ရင် လူမိုက်လား…? လူလိမ္မာ မှ စိုက်ရမည်လား …? စသဖြင့်.. အမှတ်မထင် ဆရာကြီး(စစ်ကိုင်းဦးဖိုးသင်း)၏ ဆောင်းပါးကို ဖတ်မိ၍ ဆိုလိုရင်း အမှန်ကို သိရတော့သည် ။ ဘူးပင်ကို အိမ်ဝင်းများအတွင်း မိုးအခါ […]
ကိုဗစ်ရယ် ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစုလေးကို ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်
အထက(၂)ကြည့်မြင်တိုင်မှာ Qဝင်နေတဲ့ သားအမိသားအဖလေးဦးမှာ အဖေနှင့်အမေက ပိုးတွေ့လို့ ညကပဲကုသရေးစင်တာကို ပို့လိုက်ရတယ်ကလေးနှစ်ယောက်ကို ဘယ်လို့မှခေါ်သွားလို့ မရတော့စိတ်ချရတဲ့ အသိမိတ်ဆွေကို ကလေးနှစ်းယောက်နဲ့အတူညအိပ်ဖို့ အကူညီတောင်းပီးအထက(၂) Q စင်တာမှာဘဲ နေရာပေးထားပါတယ်။ သားအကြီးက ၉ နှစ်လောက်ရှိမယ်။ အငယ်မလေးကတော့ ၉ လအဖေအမေ မသိတတ်သေးဘူး အမေ့နို့လည်းမပြတ်သေးဘူး။ အမေမှာလည်း မျက်ရည်နဲ့ […]
မှဲ့ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အယူအဆ အမျိုးမျိုးရှိ တတ်ကြပါတယ်။ မှဲ့ တစ်ခုစီတိုင်းမှာ ဘဝနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ မက်ဆေ့ချ် တစ်ခုစီ ရှိပါတယ်လို့ မှဲ့ပညာရှင်တွေက ဆိုထားကြပါတယ် ။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နေရာအမျိုးမျိုးမှာ မှဲ့တွေရှိနိုင်ပြီး အခုဖော်ပြပေးမယ့် နေရာတွေမှာရှိတဲ့ မှဲ့တွေကတော့ ကံကောင်းခြင်းနဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ကြွယ်ဝခြင်းကို […]
October 8, 2020 Shwelight 0
ယနေ့ခေတ်မှာ တချို့ မိန်းကလေးတွေဟာ ခပ်ဟော့ဟော့ အဝတ်အစားတွေ ကို ပိုမိုဝတ်ဆင်လာ ကြပါတယ် ။မြန်မာဆန်ဆန် ရင်ဖုံးနဲ့ ထမီ ဆိုတာ မြန်မာ့ရိုးရာ အဝတ်အထည် ဆိုပေမယ့် ပွဲတက်ပွဲသွားလောက်သာ ဝတ်သလို ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည် ကို လာ လည် ကြတဲ့ နိုင်ငံခြား သူေ […]
အနုပညာရှင်တွေကို ငွေပေးပြီငွေပေးပြီး ပျော်ပါးဖို့ ကြံစည်သူတွေအကြောင်း ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ ထက်ထက်ထွန်း
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ကိုဗစ်ကာလကြီးမှာ တစ်ချို့အလွယ်လမ်းလိုက်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို ပိုက်ဆံတက်နိုင်သူတွေက ငွေကြေးများစွာပေးပြီးပျော်ပါးဖို့ကမ်းလှမ်းမှုများစွာရှိနေတဲ့အကြောင်းကို ထက်ထက်ထွန်းက ဖွင့်ဟလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။သူမအနေနဲ့ကတော့ ငွေပေးပျော်ပါးသူတွေကို အပြစ်မမြင်ကြောင်းနဲ့ တန်ရာတန်းကြေးပေးပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကျေနပ်လို့ ပျော်ပါးကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှမပြောလိုကြောင်း ဒါပေမယ့် သက်ငယ်မုဒိန်းနဲ့ အလိုမတူပဲ ပြုကျင့်သူတွေကိုတော့ ရှုံးချကြောင်း အခုလိုပဲပြောပြလိုက်ပါတယ်နော်။ အနုပညာလောကထဲမှာ တက်သစ်စ မော်ဒယ်၊ အနုပညာရှင်ငယ်အချို့ကို ငွေကြေးတတ်နိုင်သူတွေက ငွေနဲ့ပေါက်ပြီး […]
ဘဝမှာ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် ပထမဆုံးထီထိုးပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်မှာပဲ ထီပေါက်ခဲ့တဲ့ထွန်းထွန်း
CeleConnections ပရိသတ်ကြီးရေ ထွန်းထွန်းကတော့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင် အဆိုတော် သရုပ်ဆောင်မင်းသား တစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခတ်တစ်ခါက မိန်းကလေးပရိသတ်တွေသာမက ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေပါ အားပေးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ယောကျာ်းလေးအဆိုတော်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ” Example ” အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့ သီချင်းတွေကိုပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အပြင် သရုပ်ဆောင်ဘက်မှာလည်း အကယ်ဒမီဆုကို ဆွတ်ခူးထားနိုင်သူတစ်ယောက်ပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ “ဘဝမှာ ပထမဆုံး […]
ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့ သူ့ရဲ့ကြော်ညာ ဗီဒီယိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းလာတဲ့ ယုန်လေး
သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ၊ သရုပ်ဆောင် ယုန်လေးကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကလည်း သူ့ရဲ့ “ငါတို့အားလုံးရဲ့မြေ” သီချင်း MV ကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာလည်း ယုန်လေးက သူကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီး ဇာတ်ညွှန်းရေးခဲ့တဲ့ ကြော်ငြာတစ်ခုကြောင့် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဝေဖန်ပြစ်တင်ပြောဆိုမှုတွေအပြင် အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းကပါ ပြစ်တင်ရှုံ့ချခြင်းကို ခံနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ […]